मानसिकरोगको उपचारमा आरटिएमएस प्रविधि भित्र्याउनेमा रिदम पहिलो – Health Post Nepal
मानसिकरोगको उपचारमा आरटिएमएस प्रविधि भित्र्याउनेमा रिदम पहिलो
२०७५ माघ २१ गते २०:२०
ललितपुरको एकान्तकुनास्थित रिदम न्युरोसाइकियाट्री हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले मानसिकरोगको उपचारमा नेपालमै पहिलोपटक अमेरिकाको एफडिएबाट मान्यताप्राप्त अत्याधुनिक आरटिएमएस प्रविधि भित्र्याएको छ । अस्पतलले स्थापनाको तीन वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सोमबार आयोजना गरेको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले रिबन काटेर आरटिएमएस प्रविधिको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
आरटिएमएस के हो ? कसरी गरिन्छ उपचार ?
मानसिकरोगीलाई आरटिएमएस प्रविधिमार्फत दिमागको बाहिरी भागबाट मेसिन राखेर माग्नेटिभ स्टुमेसन दिइन्छ । यो प्रविधि विश्वमा ३५ वर्षअघिदेखि नै सुरु भए पनि नेपालमा भने पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको छ । लामो समयसम्म औषधि सेवन गरेको बिरामीलाई उपचारमा केही सुधार नभएको अवस्थामा यो प्रविधि बढी उपयोगी हुने गर्छ ।
‘आरटिएमएस प्रविधिबाट उपचार गर्न बिरामीलाई भर्ना गर्नुपर्दैन, न त बेहोस पार्नेजस्ता क्रियाकलाप नै गर्नुर्छ,’ निर्देशक डा. थापाले भने, ‘यो प्रविधिबाट उपचार गरिरहँदा बिरामीले आरामले पुस्तक पढ्न, टिभी हेर्न तथा सजिलैसँग आफन्तसँग कुरा गर्न सक्छन् ।’
अस्पतालले यो प्रविधि भारतको मेडिकेट नामक कम्पनीबाट ३५ लाख रूपैयाँमा खरिद गरेको हो । एउटा बिरामीलाई आरटिएमएस प्रविधिबाट उपचार गर्न २५ देखि ३० मिनेट लाग्छ । बिरामीलाई यो प्रविधिबाट उपचार गर्न कम्तीमा पनि १० पटक मेसिनबाट उपचार गर्नुपर्छ । कुनै–कुनै रोगमा बिरामीलाई सुधार भएन भने २५ देखि ३० पटकसम्म पनि मेसिनबाट उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्ने डा. थापा बताउँछन् ।
कस्ता बिरामीका लागि उपयोगी छ आरटिएमएस ?
आरटिएमएस उपचार प्रविधि प्रायः लामो समयसम्म औषधि सेवन गरिरहेका वा काउन्सेलिङ गरेर पनि निको नभएका मानसिकरोगका बिरामीलाई बढी उपयोगी हुने अस्पतालका निर्देशक डा. रीतेश थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार डिप्रेसन, ओसेडी, पिडिएसटी, कडा किसिमका मानसिकरोगहरू र त्यसमा पनि कानमा आवाज आइराख्ने समस्या, जुन औषधिले पनि ठिक भएका हुँदैनन्, त्यस्तो अवस्थाका बिरामीमा आरटिएमएस प्रविधि बढी उपयोगी हुन्छ ।
डिप्रेसनका बिरामीलाई आरटिएमएस प्रविधि बढी उपयोगी हुने गर्छ । ओसेडी भएका जस्तै, एउटै सोच वा एउटै कुरा दिमागमा बारम्बार आउने बिरामीका लागि यो प्रविधि उपयोगी छ । त्यसैगरी, ठूलो घटना घटिसकेपछि उत्पन्न हुने मानसिक तनाव कोस्टोम्याटिभ स्टेसिसमा यसको प्रयोग हुन्छ । कडा किसिमको लामो मानसिकरोगको औषधि खाएर पनि कानमा आवाज आउन कम भएको हुँदैन, त्यस्ता बिरामीका लागि यो बढी उपयोगी हुन्छ ।
यस प्रविधिमार्फत उपचार गराउने सेवाग्राहीले १० पटकसम्म उपचार सेवा लिएबापत ७५ हजार तिर्नुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ । त्यसभन्दा धेरैपटक उपचार गराउँदा प्रतिपटक ५ हजार थप तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो शुल्क भारतको तुलनामा निकै सस्तो हो । भारतमा १० पटक मेसिनबाट उपचार गराएबापत ३ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम
अस्पतालको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राज्यमन्त्री डा. यादवले स्वास्थ्यक्षेत्रलाई सरकारले पनि बेवास्ता गरेको बताए । ‘सरकारले स्वास्थ्यक्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा काम गर्नु धर्मको काम गरेजस्तै हो,’ उनले भने, ‘तर, यस पेसामा जोडिएका स्वास्थ्यकर्मीले लबरले काम गरेर पाउने तलबजति पनि पाएका छैनन् ।’
उनले देशका १ सय ९ पालिकामा सरकारीतवरबाट सञ्चालित १५ बेडको अस्पताल भएको तर सरकारले ती अस्पतालमा एक रूपैयाँ पनि बजेट विनियोजन नगरेर बेवास्ता गरेको बताए । ‘स्वास्थ्यक्षेत्रमा धेरै विसंगति रहिआएको छ । उनले भने, ‘२५ वर्षअगाडि स्वास्थ्यक्षेत्रमा जुन दरबन्दी छुट्टिएको छ, त्यो आजसम्म पनि फुलफिल भएको छैन ।’
अस्पतालका निर्देशक डा. रीतेश थापाले धेरै कठिनाइका र प्रश्नैप्रश्नका बाबजुद अगाडि बढेको रिदम हस्पिटलले चौथो वर्षमा आइपुग्दा धेरै मानिसको विश्वास अँगाल्न सफल भएको दाबी गरे । उनका अनुसार हालसम्म ६ हजार ५ सय बिरामीलाई अस्पतालले ओपिडी सेवा प्रदान गरेको छ । १ हजार बिरामीलाई वार्डमार्फत सेवा प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी, ९ सय बिरामीलाई निःशुल्क ओपिडी सेवा र १८ जनालाई निःशुल्क वार्ड सेवा प्रदान गरेको छ ।
अस्पतालमा ४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । २४ घण्टै सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालमा ८ जना मानसिकरोग विशेषज्ञले उपचार सेवा दिँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले अहिलेसम्म ७ वटा निःशुल्क मेन्टल क्यापको सञ्चालन गरेको छ ।
त्यसैगरी बिरामीको सेवाका लागि २५ वटा कलेजका विद्यार्थीलाई टेड्रिङको समेत व्यवस्था गरेको छ । धुलिखेल जेलमा भएका कैदी बिरामीलाई निःशुल्क ओपिडी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हस्पिटलले हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार निःशुल्क ओपिडी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । तेस्रो वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा ललिपुरका मेयर चिनीबहादुर महर्जन, उपमेयर गीता सत्याल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम क्षेष्ठ, चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनसिंह केसीको सहभागिता थियो ।
डा. रीतेश थापा
रिदम न्युरोसाइकियाट्री हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर